Somaliland: Doorashada 2017 maxay kaga duwan tahay Doorashooyinkii hore? |
Shacbiga Somaliland saddex qof iyo Qarannimo midkee ku weyn yuhuuntooda?
Wax ka ogow tobaneeyo arrimood oo ay Doorashadani kaga duwan tahay Doorashooyinkii hore iyo kuwa ay kala mid tahay…Warbixin GNA
saddex Murrashax Madaxweyne ee Doorashada Somaliland ku tartamaya
Hargeysa(GNN)-Madaxweynaha Somaliland Axmed Maxamed Maxamuud Siilaanyo, ayaa Isagoo ay wajigiisa ka muuqato daal iyo dareen ku wajahan xaalada dalku ku jiro, khudbad dardaaran badani ku jiro uu u jeediyey Madaxdhaqameedka dalka oo uu Arbacadii ku qaabilay qasriga Madaxtooyada.
Madaxweynaha, ayaa ku boorriyey hogaamiyeyaasha Dhaqanka, Ganacsatada iyo Culimo awdiinka inay ka qayb-qaataan dejinta xiisadaha iyo xanafta ka dhalan karta tartanka Doorashada.
Madaxweynuhu maaha Murrashax, laakiinse wuxuu dedaal ugu jiraa sidii uu u qaban lahaa Doorasho nabad-gelyo iyo wanaag ku dhacda oo ku dhamaata, kana soo baxo Madaxweyne uu talada ku wareejiyaa.
Khudbadiisa oo Madaxweynuhu ka akhriyey Warqad, waxa ku jiray kelmado lafta iyo Jiidhka ugu kala saafay dadka uu la hadlayey oo isugu jiray Salaadiin, Cuqaal, Culimo iyo xubno kale oo ka socday qaybaha hormuudka Bulshada.
Xubno kamid ah Golaha Wasiirrada oo hadalka uga dambeeyey Madaxweynaha, ayaa iyaguna sii bal-balaadhiyey qodobada uu madaxweynuhu ku dardaarmay, waxaana kamid ah Wasiirka Madaxtooyada Maxamuud Xaashi Cabdi.
Madaxweynuhu waxa uu isla shalay dardaaran siiyey guddida Doorashada oo u kala ambo baxayey Gobolada dalka, si ay howlaha Doorashada uga maamulaan deegaamada lixda Gobol.
Guddida Doorashada oo ku dhawaaqay Howl-galkooda..
Maxay Doorashadani kaga duwan tahay Doorashooyinkii hore
Doorashadani waxay kaga duwan tahay Doorashooyinkii hore dhowr arrimood, waxaana ugu muhiimsan;
Dadka codeynaya oo ka yar tiradii codeyn jirtay Doorashooyinkii hore, waanay diwaan-gashan yihiin.
Codbixiyeyaasha oo ay ku adag tahay inay ku noqnoqdaan codeynta, isla markaana diwaan-gelin lagu ogaanayo qofka hal mar codeeyey lagu sameeyey, iyadoo qof waliba ka codeynayo goob mucayim ah oo ay Guddida Doorashadu u astaysay.
Gobollo aan hore Doorashadu uga dhici jirin oo hadda Sanaaduuqda codbixinta la geynayo.
Madaxweynaha talada haya oo aan ahayn Murrashax Madaxweyne.
Murrashaxiinta u tartamaysa jagada Madaxweyne ku-xigeenka oo uu ku jiro Murrashax ka soo jeeda Gobolka Sool, halka xilliyadii hore xisbiyada tartamaya ay sune u ahayd in Murrashaxa Madaxweyne ku-xigeen uu noqdo siyaasi ka soo jeeda Gobolka Awdal.
Murrashaxiinta Madaxweyne oo iyaguna ka soo jeeda Gobolada dhexe (laba Hargeysa ah iyo mid Togdheer ah), halka labadii Doorasho Madaxweyne ee Somaliland ka dhacay uu Murrashax Madaxweyne u tagnaa Madaxweynihii hore Daahir Rayaale Kaahin, kaasoo taraxayey Murrashaxiinta isku deegaanka ka soo jeeday.
Murrashax Faysal iyo ku-xigeenkiisa oo ka soo jeeda Gobolka Sool..GNA
“Waa Doorashadii ugu amaanka fiicnayd, sababtoo ah waxaan dhici karin wax ku noqnoqasho ah, taasoo meesha ka saaraysa in lagu murmo natiijada” sidaas waxa Gobanimonews u sheegay Mustafe Axmed oo ah aqoonyahan ku takhasusay Culuumta Tiknoolajiyada iyo Nabad-gelyada.
Qabyaalada oo saraysa
Dad badan ayaa saluugsan sida wax u socdaan, siiba dhanka Olollaha.
Murrashaxiinta iyo xisbiyadooda, waxa lagu dhaliilayaa inay dhiiri-gelinayaan qabyaalada, iyagoo ku kacay waxyaabo bulshada kala qaybinaya ama si uun u saameynaya midnimada Shacbiga.
Sawirkan hoos yaalla oo laga qaaday mid kamida Xafiisyada Xisbiga Mucaaridka ee WADDANI ayaa tusaale u loogu soo qaadan karaa, heerka qabyaalada iyo u magacyo bixinta Beeluhu ugu lamaantahay Olollaha Doorashada.
Mid kamida Boodadhka Xafiisyada Xisbiga WADDANI
Xisbi qudha laguma eeddeynayo arrinta qabyaalada ee saddexda Xisbi, mid waliba wuxuu calaamadiyey talaabooyin qabiil ama qayb kamid ah Bulshada uu dhabarka ku saarayo, wallow Murrashaxa Xisbiga UCID Eng. Faysal Cali Waraabe uu sheegay inaanu qabiil gaar ah iyo qollo toona codka ka doonayn ee uu Somaliland oo dhan uga marti-yahay taageero.
waxkastaa noqon mayaan Sida la moodayo
Inkasta oo welwel jiro mararka qaar, kaasoo salka ku haya inay xiisad iyo cunfi kiciyaan hadallo Xanaf iyo nacayb ka muuqdo oo ay siyaasiyiinta qaar u isticmaalayaan Ololaha, haddana Bulshada Somaliland maaha dad u nugul baaqyada lagu kicinayo shucuurtooda.
Waxa kale oo lagu tilmaami karaa inay yihiin Bulsho wakhti dhow uun ka soo kabatay dhibaatooyin ka soo gaadhay Dagaallo sokeeye iyo kuwii waddanka lagaga saaray Dawladdii Milateriga ahayd ee Siyaad Barre.
Xusuusta sii qoyan ee dhacdooyinkaas laga soo doogay waxay dadweynaha ka hor-joogsanaysaa inay qayb ka noqdaan qul-qulatooyin siyaasaddeed oo dalka ka dhaca, xataa haddii ay Murrashaxiinta laga guulaystaa isku-dayaan arrintaas.
Doorashada Somaliland ka dhacaysa 13 Bisha November waa mid Indhaha caalamku aad u hayaan. Waxa dalka ku sugan goob-joogeyaal badan oo caalami ah, kuwo kalena waxa la filayaa inay soo gaadhaan maalmaha soo socda.
Arrinta xiisaha leh ee dhinaca caalamka waxa ay tahay ah inay dawladdaha Carabta qaarkood si weyn u danaynayaan inay si nabad-gelyo ah ku dhacdo Doorashadu. Waxa kale oo xusid mudan inay qaarkood Murrashaxiinta tartamaya kala dooranayaan.
Sababta ay Wadamada carabtu markii ugu horaysa Doorasho ka dhacaysa Somaliland xiiso ugu samaynayso, waxay tahay loollanka Dhaqaale iyo midka Istaraatiijiyaddeed ee dhexdooda iyo caalamkuba ugu jiro Gobolka oo Somaliland fursad weyn siiyey.
Heshiiska Maal-gashi ee horaantii sanadkan dhex maray Dawladda Madaxweyne Siilaanyo iyo Shirkadda DP World oo laga leeyahay dalka Imaraadka ayaa furre u noqday bilowga Iskaashi dhinac walba leh oo dhex mara Somaliland iyo dunida Carabta.
Si lamid ah, kuwaas ayey daneeyayaasha kale ee dunidu isha ugu hayaan sida ay u dhacayso Doorashada iyo natiijaddeeda dambe.
Dhamaan arrimahan oo dhami waa kuwo muujinaya in Doorashada Somaliland ka dhacaysa laba todobaad kaddib, xambaarsan tahay musawirro ka duwan kuwii doorashooyinkii hore.
Dadka reer Somaliland waxay rejjo wanaagsan ka qabaan inay noqoto Doorasho wax weyn ka bedesha mustawaha dalkoodu kaga jiro caalamka. Waxa ugu fiican ee dalabkoodu yahay waa inay helaan Ictiraaf Caalami ah iyo Maal-gashi Dhaqaale.
FG: Warbixinta waxa diyaariyey Tafafriraha GNA, waxaana ka qayb-qaatay Axmedyaasiin Maxamed Jaamac oo ka faallooda Siyaasada Somaliland